CIN Khabar तपाईंसँग नयाँ व्यवसायिक सोच छ ?
तपाईंसँग नयाँ व्यवसायिक सोच छ ? विश्व युवा सम्मेलनमा नेपालका युवालाई अवसर
सीआईएन बिहिबार, जेठ २, २०७६, ०८:४८:००
पवन पौडेल, दमौली एफएम, तनहुँ
तपाईसँग नयाँ खालको व्यवसायिक सोच छ ? यदि छ भने तपाईंको योजनाले विश्वस्तरीय सम्मानका साथै व्यवसायिक योजनाका लागि अवार्ड पनि पाउन सक्छ ।
विश्वका युवाहरुको सशक्तिकरणका पक्षमा काम गरिरहेको युथ टाईम इन्टरनेशनलले त्यस्तै प्रेरक युवाहरुको खोजी गरिरहेको छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यमा डिसेम्बरमा नेदरल्याण्ड्सको एम्स्टरड्ममा हुने विश्व युवा सम्मेलनमा वातावरण र समाजमा सकारात्मक प्रभाव छाड्दै सञ्चालित व्यवसायका योजनाको छनोट हुनेछ ।
युथ टाइमले त्यस्ता योजना सञ्चालनका लागि सहयोग समेत गर्नेछ । पछिल्लो समय विश्वमा सञ्चालित उद्योगधन्दाले वातावरणीय रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ ।
संस्थाले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने विश्व युवा सम्मेलनमा फरक विषयमा उद्यमशिल युवाहरुको योजनाहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराएर उनीहरुलाई त्यस्ता योजना सञ्चालनमा सघाउने गरेको छ ।
यस्तो परिवेशमा नाफासँगै समाज र वातावरणका लागि सकारात्मक योगदान दिनका लागि युवाको भूमिकाको खोजी गरिन लागिएको आयोजक संस्थाको भनाइ छ ।
विश्वभरका युवा तथा उद्यमीहरुको सहभागीता रहने सम्मेलनमा एक पटक नेपाली युवाको योजना पुरस्कृत भइसकेको छ । आयोजक संस्थाले आफ्ना रचनात्मक प्रस्तावका साथ सम्मेलनमा आवेदन दिनका लागि युवाहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
संस्थाले युथ ग्लोबल फोरम डट ओआरजीमा गएर आफ्ना प्रस्तावसहित सम्मेलनमा सहभागीताका लागि युवाहरुमाझ आह्वान गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २, २०७६, ०८:४८:००